मेरो आँखामा कीर्तिनिधी विष्ट – eratokhabar
मेरो आँखामा कीर्तिनिधी विष्ट
ई-रातो खबर २०७४, ६ मंसिर बुधबार १३:०५ November 22, 2017 1970 Views
ईश्वरीप्रसाद दाहाल ‘असारे’, अध्यक्ष, केन्द्रीय सल्लाकार समिति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
पूर्व प्रम कीर्तिनिधी विष्टको २०७४ कात्तिक २५ गते आफ्नै निवास ज्ञानेश्वरमा ९० वर्ष ११ महिनाको उमेरमा निधन हुनगयो । अर्बुद्ध रोगबाट पीडित विष्टको बिहान १०ः३० तिर निधन भएको थियो । मैले उनको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानसाथ होला भन्ने सोचेको थिएँ । सार्वजनिक सूचनाको भरमा मनज्ञानले आर्यघाट पुग्दा अन्तिम संस्कार चलिरहेको थियो । जहाँ प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । तर ती प्रहरी अधिकृतको लागि आएका रहेछन् ।
साथी विष्णुहरी नेपालले मलाई विष्टका छोरा डा. विनोद विष्टसँग चिनजान गराए । हामीले आपसमा चिनजान, समवेदना, आभार आदि औपचारिकता पूरा ग¥यौं । लामो कुरा गर्ने समय त्यो थिएन । पञ्च र राजावादी भएपनि एकजना देशभक्त, इमान्दार र नैतिकवान नेताका रूपमा श्रद्धाञ्जली दिएर फर्किएँ । दिवंगत कीर्तिनिधी विष्टको राजनीतिक शुरुवात डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट भएको हो । जसको महासचिवसम्म भएका थिए । उनी मातृका प्रसाद कोइराला, श्री भद्र शर्मासहितको नेपाल जनता परिषदको पनि नेतृत्वमा रहे । तर २०४६ सालपछि पूर्व पञ्चहरूको कुनै पनि पार्टीमा विष्ट संलग्न भएनन् ।
२०१७ सालमा पञ्चायतमा प्रवेश गर्नु अघि विष्ट नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा नै थिए । पञ्चायतीकालमा ३ पटक प्रम बने । पटक–पटक मन्त्री परिषद उपाध्यक्ष, उप–प्रम बने । । २०६१ सालको ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्री परिषदमा तुलसी गिरीपछि दोश्रो मर्यादाक्रममा रहनेगरी क्रियाशील नभएपनि विष्टलाई मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष बनाइयो । सायद ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रवादी छविका विष्टबाट सहानुभूति लिन चाहन्थे । २०२६ सालमा उत्तर–पूर्व ओलाङचुङ्गोलादेखि पश्चिम–उत्तर टिङ्करसम्म तैनाथ भारतीय सैनिक जाँच चौकी हटाउने महत्वपूर्ण कामको नेतृत्व विष्टले गरेका थिए । त्यो काम ऐतिहासिक महत्वको काम थियो । पहिलो कार्यकालमा भएको त्यो कामले विष्ट चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । उनी प्रखर वक्ता र देशभक्त थिए ।
केही वर्षअघि रमेश शर्मा र म विष्टसँग अन्तर्वार्ता लिन उनको निवास पुगेका थियौं । उनको जोस र इमानले हरेक इमान्दार मान्छेलाई प्रभावित गथ्र्यो । उनी साधारण र सरल दिनचर्या बिताउँथे । आजका मन्त्री, नेता, कर्मचारीको उठबस र कीर्तिनिधी विष्टको जीवन आधारभूत रूपमै भिन्न थियो । उनी बिहान नक्साल, गौशाला, सानोगौचरण टहल्न निस्कँदा युवाहरूलाई भेट्न मुस्किल पथ्र्यो । केही समययता टहल्न नसक्ने भएका थिए । उनले २०४६ सालपछि सरकारी सुविधा लिएनन् ।
सरकारी ओहोदामा रहेको समयमा ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ नेपालको हित विरोधी असमान रहेकाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विष्ट पहिलो र एक्ला नेता थिए । उनी नैतिकवान थोरै नेतामा गनिन्थे । २०३० सालमा सिंहदरवारमा आगलागी भएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । भनिन्छ राजा वीरेन्द्रले राजीनामा फिर्ता लिन भन्दा पनि उनी आफ्नो अडानमा कायम रहे । २०४२ सालमा रामराजा प्रसाद सिंहले सिंहदरवारभित्र बम आक्रमण गराएपछि पनि विष्टले राजीनामा दिएका तर राजा वीरेन्द्रले रोकेको चर्चा थियो । आज लोकतन्त्रको गीत गाउँदै जनता ठग्ने, देश बेच्ने काम भइरहेको छ । पञ्च र राजावादी भनेर नाक खुम्च्याउने संसदवादी नेताहरूमा विष्टको जति नैतिक बल र देशभक्ति हुन्थ्यो भने नेपालको यत्रो वर्वादी हुने थिएन ।
हामी देशभक्त व्यक्तित्वको सम्मान गर्न चाहन्छौं । विदेशीले आफ्नो स्वार्थअनुसार लेखेको र छट्टु संसदीय नेताहरूले गीत गाएको इतिहासको प्ुनरलेखन गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टीको निर्णयअन्ुसार पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा म श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाट पुगेको थिएँ । मलाई लाग्छ विष्टप्रतिको सम्मान देशभक्त धाराको सम्मान हो । जर्मनीको हिटलरले रुसमाथि आक्रमण गर्दा स्टालिनले जारका प्रतिनिधिहरूसँग संयक्त मोर्चाको आव्हान गर्नुभएको थियो । देशलाई बर्बाद गर्ने दलालका विरुद्ध विचार, राजनीति र जनतन्त्रको प्रश्नमा फरक सोच भएपनि देशको माया गर्ने शक्तिहरू सहकार्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो । देशभक्त नेता विष्टप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
२०७४ मंसिर ६ गते साँझ ६ : ५० मा प्रकाशित
नेकपा पर्वतका सह–इन्चार्ज गिरफ्तार
महासंघद्वारा गिरफ्तार पत्रकारलाई रिहा गर्न माग